အဆောက်အအုံအသွင်အပြင်, အိမ်စျေးနှုန်းများမြင့်မားတဲ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အဟောင်းကိုအဆောက်အဦအဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းမှတဆင့် refurbished သည်နှင့်အိမ်စျေးနှုန်းမှာအနည်းဆုံး 20% တိုးစေနိုင်သည်။ တည်နေရာသည်ကောင်းလျှင်, ပတ်ဝန်းကျင်ပင်3သို့မဟုတ် 40% မြင့်တက်စေ! သို့သော်အစဉ်အလာဆောက်လုပ်ရေးအသားအရေကိုမကြာခဏလပေါင်းများစွာကြာနှင့်အကုန်အကျဖြစ်၏ ဒါကြောင့်ဆေးသုတ်ဖြင့်အစားထိုးနေသည်ဆိုပါက, က, ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးသုံးပုံတစ်ပုံကိုကယျတငျနိုငျသညျ့အခြိနျနီးပါးလေးပုံသုံးပုံနှင့် 1000 ကျော်မျိုး။ အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားကိုအလွယ်တကူနုပျိုနိုင်အောင်, ရွေးချယ်ဖို့ pattern အရောင်, ကြွယ်ဝသောအရောင်တူညီသည့်!
အိမျကလူအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသည်အမြဲတမ်းအနှစ်နှင့်အတူသွားရလိမ့်မယ်။ အိမ်သူအိမ်သားပြင်အုပ်ကြွပ်၏အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်, ပြင်မြို့ရိုးတို့သည် seepage, မြို့ရိုးအကင်ဆာ, နှင့်နွမ်းမိသားစုကံဇာတာကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံစံ - 6-1-04